သူဌေးဖြစ်ချင်လား…ငါတို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုမလဲ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » သူဌေးဖြစ်ချင်လား…ငါတို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုမလဲ (၂)
Posted by Smiegol on Jul 5, 2011 in Business & Economics, Ideas & Plans | 13 comments
မနေ့က ပြောခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့တွေ သူဌေးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေများပါတယ်…ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပါ
အရှင်းဆုံးပြောရရင် သူဌေးလို ဇိမ်ခံချင်တယ်ဗျာ…
ကဲ..အဲဒါဆို သူဌေးဆိုတာ ဘာတွေလုပ်ရလဲ….ဘာတွေကြောင့် ချမ်းသာနေတာလဲ
အရမ်းကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုအသာထားပြီး လုပ်ငန်းသေးသေးလေးတစ်ခုရဲ့ သူဌေးတစ်ယောက် ခဏလောက်လုပ်ကြည့်ရအောင်
ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တွေမှာ ၀န်ထမ်းတွေရှိကြတယ်..
အဲဒီဝန်ထမ်းတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရည်အချင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး လစာနှုန်းထားတွေကွဲပြားကြတယ်..
ဟုတ်ပြီ..အဲဒီလစာနှုန်းထားတွေကို သတ်မှတ်သူတွေက ဘာတွေကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တယ် ထင်လဲ…
အလုပ်ထဲမှာကြားနေကျစကားတစ်ခုပေါ့..ဘာမှတတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူး ကောင်းစားနေတာ..ဟုတ်ပြီ သူဘာလို့ကောင်းစားတာတုန်း
သူက တစ်နေရာရာမှာ တခြားသူတွေထက်ပိုပြီး တာဝန်ယူနိုင်လို့ပါ..
သူဌေးတစ်ယောက်ဟာလူတစ်ယောက်ကို လစာ ၅သိန်းပေးပြီး အလုပ်ခန့်ထားရင် သူတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ပမာဏက ၁၅သိန်းဖိုးလောက် ပြန်ပြီးပေးဆပ်နိုင်လို့ပါ..
အဲဒါဆို တစ်လကို သိန်း၁၅၀ ရှာနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်က သိန်း၄၅၀ ဖိုးတာဝန်ယူနိုင်လို့ပါ..
၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကို လစာ ၅သောင်း၊ ၁၀ယောက် ၅သိန်း
အခန်းခ တစ်လ တစ်သိန်းခွဲ၊ စုစုပေါင်း ၆သိန်းခွဲမှ မရရင် အဲဒီအလုပ်မအောင်မြင်ဘူး။
ကောင်းပြီ..ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ ရေရှည်မခံတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ၊ Fancy ဆိုင်လေးတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်လေးတွေ ဘာဖြစ်လို့ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေတာတုန်း
ရှင်းရှင်းပြောရင် သူတို့ တာဝန်မခံနိုင်လို့ပါ..လစဉ်အသုံးစရိတ်ကို တာဝန်မခံနိုင်လို့ပါ..
၀န်ထမ်းလစာနဲ့ အခြားခံစားခွင့်တွေကို တာဝန်မခံနိုင်ရင် ၀န်ထမ်းမမြဲတာတို့ ၀န်ထမ်းကောင်းမရတာစတဲ့ ပြသနာတွေကို အမြဲတမ်းဖြေရှင်းနေရမှာပဲ..
လကုန်လို့ ၀န်ထမ်းတွေလစာထုတ်ပေးဖို့ သူဌေးတစ်ယောက်မှုာ အဆင်သင့်ရှိရပါမယ်.. ရှုံးတာမြတ်တာသူ့တာဝန်ပါ..လစာယူမှာ ၀န်ထမ်းတွေတာဝန်ပါ..
ကဲ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီတာဝန်ယူနိုင်လား..
နောက်တစ်ခု ကိုယ့်လုပ်ငန်း၊ ကိုယ့်ဆိုင်လေးကို ၀ယ်ယူသူများများသိမှ အောင်မြင်မယ်လေ
မြတ်မလား၊ ရှုံးမလား၊ မသိရသေးတဲ့ အလုပ်တစ်ခုအတွက် တာဝန်ဘယ်လောက်ယူနိုင်လဲ..
ညံ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေတော်လာအောင်၊ သုံးမရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ နဲသထက်နဲအောင်လုပ်ဖို့
ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်..၀န်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ယူမှုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကွာခြားချက်ပါ။ သူဌေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ကြိုးစာရမှာက သူများထက်ပိုပြီးတာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူ အစစအရာရာ ခေါင်းခံနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် လုပ်ရမှာပါ..
သင်တို့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်ပါ့မလား…
သေချာတာတော့ သူဌေးဖြစ်ချင်တော့ သူများထက် အပင်ပန်းခံရမှာပဲ
သေချာတာတော့ သူဌေးဖြစ်ချင်ရင်တော့ သူများထက် အပင်ပန်းခံရမှာပဲ
ဟုတ်ကဲ့ပါ လောလောဆယ် ငွေကြေးလည်းမတတ်နိုင်သေးတော့ သူဌေးအဆင့်ကို မမှန်းရဲသေးလို့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ ဘာလဲပဲ လေ့လာနေတော့တယ်။
ကျွန်မ ကတော့ သူဌေးမဖြစ်ချင်းဘူး၊ ချမ်းပဲချမ်းသာချင်တာ။
လူအတော်များများမှာ entrepreneurship ဆိုတဲ့ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင် အရည်အချင်းရှိကြတယ်။ မရှိတာ ရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း၊ အဲဒါအရမ်း အရေးကြီးတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ တာဝေးပြေးတာ၊ အများက တာတိုပြေးသလို ဝုန်းကနဲထွက်နိုင်တယ်၊ ကြာလာရင် ပန်းလာပြီး ဖေါက်ကုန်တယ်။ လူတရာမှာငါးဆယ်က လုပ်ငန်းတခု စတင်နိုင်တယ်၊ သို့ပေမယ့် ငါးယောက်တောင် ကြာရှည်မမြဲဘူး၊ ရေရှည်မှာကြုံရတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေ စတာတွေကြောင့် လုံးပါးပါးသွားတာများတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူဌေးနဲပြီး အလုပ်သမားများတာပေါ့နော်။ ကိုယ့်ဖာသာ အေးအေးနေပြီး သူဌေးဆီက ရသလောက်ချူစားတာပဲ ကောင်းပါတယ်.. :eek:
သူဌေးတော့ မလုပ်ချင်ဘူး ..
တာဝန်ယူမှုဆိုတာလေးကို သဘောကျတယ်။ အလုပ်ရှင်ကော ၀န်ထမ်းမှာပါ တာဝန်ယူတတ်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဘယ်အလုပ်မဆို စေတနာပါပါလေးလုပ်မယ်ဆိုရင် တာဝန်ဆိုတာကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးအဖြစ် မမြင်တော့ပါဘူး။ ဆက်ရန်ကို စောင့်နေပါတယ်နော်။
( ဘယ်အလုပ်ကို များဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရမယ်ဘာညာပေါ့
ဒီနေရာမှာ တစ်ချို့တွေဟာ ရတဲ့ငွေကို လှည့်ပတ်တတ်ကြပါတယ်
ဝင်ငွေကို မတိုးပွားနိုင်သ၍ ဖြုန်းတီးတဲ့နည်းနဲ့ငွေကိုလျှောနည်းသွားအောင် မလုပ်မိဘို့ပါ
ဒီအကြောင်းတွေက ပြောတာ တော်တော်လွယ်ပါတယ်
စုစောင်းခြင်းဆိုတာ တည်ဆောက်ခြင်းလို့ သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်
မစုစောင်းနိုင်ဘဲ ( သုံးစွဲခြင်းတွင် မဆင်ခြင်နိုင်ဘဲ )
စုစောင်းဘို့ အရည်အချင်း ဘယ်လိုရှိနိုင်မှာလဲ
ဘာမှလောစရာမလိုဘူး အေးဆေးပါ လို့သဘောထားပြီး
နောက်ပိုင်းမှာ အရင်းအနှီးနဲနဲလေးနဲ့ လုပ်ငန်းလေးစကြည့်ဖို့နဲ့
အခုလောလောဆယ်ရေးနေမိတာတွေအားလုံးက လုပ်ငန်းလေးတစ်ခု အစပိုင်းမှာ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံလေးတွေကို အရိုးရှင်းဆုံးစကားလုံးအသုံးအနှုန်းကအစ ရွေးပြီးသုံးခဲ့တာပါ..
တကယ်တော့ ဒီ Post လေးကို ဖတ်ရင်း ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခုကျန်ခဲ့ရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်..
အလုပ်လုပ်တာ အမြတ် အသာထား အရင်ဆုံး သူများ အတွက် အရင်ရှာရတာ.. ၀န်ထမ်း လစာ အခန်းစရိတ် မီတာ ရေ စသဖြင့်.. ပြီးတော့ အရင်း ဆက်လက်တည်တံ့ဖို့.. နောက်ဆုံးကတော့ ကိုယ့်အတွက်.. ရုန်းကန်ရင်း တက်သွားတဲ့ လူတွေ ရှိသလို ရုန်းရင်းနဲ့ မြုပ်သွားတဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ်။
အလွယ်ဆုံးကတော့ ငွေ အရင်းများများနဲ့ လိုက်ရင် သိပ်ပြီး မတွေးရတော့ဘူး။
Bravo! Smiegol ။ ဘယ်အလုပ်မဆို ရင်နှီးရတာ များလေ တာဝန်ယူရတာ များလေလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေ ရလိုက်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံး ဆက်တင်နိုင်ရန်လည်း မျှော်လင့် နေပါတယ်။
ဒေါ်လာတွေ အထပ်လိုက်နဲ. လာလာ ဂါရ၀ ပြုနေရတာတွေ.နေရလို.